लाजमर्दो हर्कतवाला भिडियो लिक शिक्षक र विद्यार्थीको : पुरै इलाका स्तब्ध - Social Video Khabar
लाजमर्दो हर्कतवाला भिडियो लिक शिक्षक र विद्यार्थीको : पुरै इलाका स्तब्ध
भिडियो नै सार्वजनिक भएपछि रुपेशलाई जागिरबाट बर्खास्त गरिएको छ । प्रहरी उपरीक्षक मुन्द्रिका प्रसादले घटनाको प्रहरीले सुक्ष्म अनुसन्धान गरिरहेको बताएका छन् ।
मसाज सेन्टरमा खुलमखुल्ला यस्तो धन्दा, ३० मिनेटपछि युवतीका कुरा सुन्दा तपाई चकित पर्नुहुनेछ १
यहाँ मसाज गराईन्छ’ बोर्डमा लेखिएको हुन्छ । मसाज गराउनका निम्ति ग्राहक काउन्टरसम्म पुग्छन् । त्यसपछि महिला होस् या पुरुष स्वागतका निम्ति आउने गर्दछन् । पानी पिउन दिईन्छ । त्यसपछि सोध्ने गरिन्छ भन्नुहोस् सर कस्तो मसाज गर्ने रु थाई, स्वीडिश, डिप टिश्यू अर्थात् ट्रिगर आदि आदि । दर्जनौँ मसाजका विकल्प प्रस्तुत गरिन्छन् ।
महिला या युवती कसबाट मसाज गराउनु हुन्छ रु यो तपाईको ईच्छा । ग्राहक कोठामा जान्छन् । करिब ३० मिनेट बितेपछि मसाज गर्लले केही कुरा सोध्छिन् । त्यो सुनेर ग्राहक अक्कबक्क समेत पर्छन् ।
सर, एक्ट्रा सर्भिस के लिनुहुन्छ रु ग्राहकले कुनै प्रतिक्रिया जनायो भने शुरु हुन्छ, अवैध धन्दा कोठामा नै तय गरिन्छ एक्ट्रा सर्भिस रेट भारतको दिल्लीमा रहेका करिब ३४ वटा मसाज सेन्टरको रिपोर्टका आधारमा यो बिषय बाहिरिएको हो । जहाँ मसाज गर्ने महिलाले ग्राहकसँग एक्स्ट्रा रेटको तय गर्दछन् । एक मसाज गर्लका अनुसार एक्स्ट्रा मसाजका लागि एक जनाको २ हजारदेखि रेट तय हुने गर्दछ । यसमा दुवै पक्षको परामर्शका आधारमा रेट तय हुने गर्दछ ।
मसाज सेन्टरमा काम गर्ने युवती भन्छिन्, ‘एक्स्ट्रा रेट मसाज गर्ने बेला नै लिईन्छ ।’ पहिले अवैधधन्दामा संलग्नहरुमात्रै मसाज सेन्टरमा जान्थे अहिले कलेजमा पढ्ने युवतीको समेत आकर्षण बढेको छ ।
उनीहरु नाम चेन्ज गरेर त्यहाँ काम गर्छन् । पहिले–पहिले मसाज सेन्टरमा साहुले तलब दिन्थे अहिले त्यस्तो अवस्था छैन । मसाज सेन्टरमा काम गर्ने महिलाले ग्राहक खोज्नुपर्ने हुन्छ । या आएको ग्राहकबाट एक्स्ट्रा मसाज लिनुपर्ने हुन्छ ।
आफ्नै भान्जी बलात्कार गरेको आरोपमा झापाको शिवसताक्षी—११ स्थित दुधेबाट एक व्यक्ति पक्राउ परेका छन् । तर, सहोदर मामाले जबरजस्ती करणी गरेको घटना ढाकछोप गर्न परिवारका सदस्य नै सक्रिय भएको समेत खुलेको छ । दुधेका ४१ वर्षिय मामाले आफ्नै घरमा बस्ने १६ वर्षीया भान्जीलाई करणी गरेपछि घटना ढाकछोपको प्रयास भएको हो । बिहिबार बिहान घरमा कोही नभएको मौकाछोपी मामाले करणी गरेको र कसैलाई नभन्न दबाब दिएको बालिकाले बताइन् ।
‘घरमा कोही पनि हुनुहुन्थ्यो, माइजुलाई पनि मासु किन्न पठाएर मामाले मलाई मुख थुनेर त्यस्तो गर्नुभयो’ किशोरीले भनिन् । स्थानीय विद्यालयमा अध्ययनरत ती बालिकाले आइतबार साथीलाई रुँदै घटनाबारे सुनाएपछि उनीहरुले प्रहरीलाई जानकारी गराएका थिए
इलाका प्रहरी कार्यालय झिलझिलीका प्रहरी प्रमुख प्रहरी निरीक्षक ढुण्डीराज गिरीले अभियुक्त मामालाई सोमबार नै पक्राउ गरेको बताए ।
पीडितका बुबा भारतको दार्ज्लििङ र आमा वैदेशिक रोजगारमा रहेका कारण प्रहरीमा जाहेरी दिने अभिभावक समेत नरहेको अवस्थामा प्रहरीको आग्रहमा विद्यालयकी एक शिक्षिकाले जाहेरी दर्ता गरेकी छन् । अभियुक्त पक्राउ परेसँगै वैदेशिक रोजगारीमा रहेकी पीडित बालिकाकी आमालाई समेत दबाब र प्रभावमा पारेर ‘मेडिकल टेष्ट’ र जाहेरी दर्ता नगर्न दबाब दिइरहेको पाइएको छ ।
इलाका प्रहरी कार्यालय झिलझिलले पीडित बालिका र अभियुक्तको समेत ‘मेडिकल टेष्ट’ गराएको र थप अनुसन्धान भइरहेको जनाएको छ । दार्ज्लििङ घर भएकी पीडित बालिका अहिले विद्यालय र प्रहरीको संरक्षणमा छिन् । ती बालिका विगत २ वर्षदेखि मावलमा बसेर अध्ययनरत थिइन् । मामाले यस अघि पनि चुम्बन गर्ने लगायतका शारीरिक र्दुव्यवहार गर्दै आएको पीडित बालिकाले बताइन् ।
Prevपहिला मजा लिएर हेर्छन अनि पछि छि-छी गर्छन ..पुरा हेर्नुहोस
Nextउता बुढा बिदेशमा यता बुढी मोजमा
विश्वकै आठौं आश्चर्य नेपालमा: ११ बर्षमै आमा बनिन् भावना बस्नेत !!भिडियो हेरेर सहयोग र सेयर गरौं #GoodLuck
सुत्नु अगाडी श्री स्वस्थानी ब्रत कथा भाग-५ सुन्नुहोस ! तपाईको अधुरा काम पूरा हुनेछन, बिल्कुलै बेवास्ता नगर्नुहोस ठुलो अनिष्ट हुनसक्छ
आजको राशिफल / वि.सं. २०७६ आषाढ २३ गते शोमबार